Iibhodi zamabali ezinomdla zeAkira Kurosawa enkulu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ibhodi yamabali ibaluleke kakhulu ukulungiselela ukudubula kwaye ke Iifoto nganye eziza kungena kwezo ndawo ibaluleke kakhulu kwimuvi. Sisikhokelo somlawuli osuke kwiskripthi waya kulwimi olubonakalayo ekufuneka etolike ngeyona ndlela ifanelekileyo.
Umlawuli waseJapan u-Akira Kurosawa ngu Waziwa ngokuba yimiboniso bhanyabhanya ekhethekileyo kananjalo, ekugqibeleni, ngenxa yeendlela zakhe zobugcisa ezibalaseleyo ukumenza abe ngumzobi obalaseleyo. Ziibhodi zebali lakhe ezitsala umdla wethu ngenxa yokuqaqamba kwazo kunye nombala.
Omnye wabo baculi abahlukeneyo uyaziwa ngeefilimu zonqulo, kodwa ukuba ekupeyinteni wayenazo nezipho ezintle njengoko kunokubonwa kwiibhodi zakhe zamabali. Indoda egqibeleleyo enokuzinikezela iiyure ezininzi ekugqibeleni ifumane isiphumo esifunekayo kwibhotile nganye. Umsebenzi yenye yezipho zakhe.
Yayibonakaliswe ngokusondela kubadlali ukuba babanyanzele nxiba iimpahla zabalinganiswa bakho iiveki ukwenza ubudlelwane bemvakalelo kunye nabo. Umlawuli wefilimu enamacandelo amaninzi kunye nezinto ezithile ezifanelekileyo ukuba zifundelwe kwabo bangabadlali beqonga, umlawuli okanye bakwindlela ethile ebonakalayo.
Kodwa kukwibhodi yakhe yamabali apho iinkwenkwezi kule posi xa uzipeyinta efanayo ukucinga indawo, i-psychology yabalinganiswa, iintshukumo kunye nendlela yokubabamba. Kwaye ngaba ngaphambi kokuba abe ngumlawuli wefilimu wokufunda ukupeyinta, ke iibhodi zebali lakhe azilibaleki.
Ikwangulowo ukhumbula indlela xa wayezama ukwenza imizobo, khange ithathe ingqalelo yoluntuKodwa wayifumana le ngqwalaselo xa wayeqala ukusebenza kwiifilimu zakhe.
Njengoko ubona kwi imifanekiso yakho iya kwiinkcukacha, umbala omkhulu kunye nesenzo sokuncedana kunye nokuba yinkampani efanelekileyo yokuhlanganisa ihlumelo lokugqibela.
Ngaphambi kokuba ndihambe, ndiyakushiya enye yeebhodi zamabali zeziqendu zokuqala Umdlalo weZihlalo zobukhosi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Iibhodi zamabali zomlawuli wefilimu yeqonga uAkira Kurosawa